.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: MP3 M4R Converter
ဒီ MP3 M4R Converter လေးက iPhone Ringtone တွေဖန်တီးဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် iPhone မှာ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် သီချင်းလေးတွေကို Ringtone အဖြစ်သုံးချင်ရင် ဒီ Converter လေးနဲ့ .m4r ဖော်မက်
ပြောင်းပြီး သုံးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Video, Audio ဖော်မက်တော်တော်များများအပြင် SWF ဖော်မက်တွေကိုပါ ပြောင်းလို့
ရပါတယ်။ ပြောင်းလို့ရတဲ့ ဖော်မက်တွေကလည်း .m4r အပြင် အများကြီးပါပဲ။ အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..။
ကျွန်တော်ကတော့ SWF Flash Song တစ်ပုဒ်နဲ့ Mp4 Video တစ်ပုဒ်ကို Mp3 စမ်း ပြောင်းကြည့်တာ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Full Version ဖြစ်အောင်ကတော့ ကီးထည့်ပြီး သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Download: MP3 M4R Converter with Key
ကိုယ်တိုင် ကီးထည့်ပြီး Full Version လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ထဲက ကီးကို Register ကို နှိပ်ပြီး Registration Code မှာ
ထည့်ပါ။ Registration Name မှာတော့ ကိုယ့်နာမည်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားအဆင်ပြေတဲ့နာမည်တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် ရေးပြီး လုပ်ပါ။
နောက်နေ့ကျမှ ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို သုံးရလွယ်အောင် Portable လေး လုပ်ပေးပါဦးမယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း
ကိုယ်တိုင် Full Version လုပ်ပြီး သုံးရတာကို ပိုသဘောကျတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆို ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။
အောက်မှာ ကျွန်တော် ကီးထည့်ပြီး Portable လုပ်ထားတာလေး သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်တာပါပဲ။ မပြေဘူးဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတာကိုပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ကီးထည့်ပြီး
Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်သုံးကြပါ။ လာရောက် လည်ပတ်အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Download: Mp3 M4R Converter Portable
Posted by Thurainlin at 10:13